Chọpụta omenala nke Ireland | Akụkọ Njem
Omenala ndị Irish
Susana Garcia | | General, Ireland
Nleta ireland ọ bụ nnọọ ahụmahụ. Anyị na-ekwu maka otu ebe anyị na-ahụ ndị mmadụ na-anabata ma na-emeghe karịa Bekee. Ndi Irish nwere mpako na omenala ha na obodo ha, ya mere ha gha acho igwa anyi karia banyere ha nile, ma oburu na ichoro inwetakwu ihe tupu i mee njem, lee anya.
Taa, anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime Omenala ndị Irish nke ahụ ga-eme ka anyị bịarukwuo ndụ gị nso. Obodo a ka nwere ọtụtụ ihe na-emetụta ụwa Celtic, ihe a na-ahụ n'ọtụtụ ọdịnala ya.
1 Mmemme nke Saint Patrick
2 Ndị Leprechauns
3 Agbamakwụkwọ na Ireland
4 Egwuregwu Ireland
5 Nri na Ireland
6 Samhain na Yule
7 Egwú na ịgba egwu
Mmemme nke Saint Patrick
La oriri nke Saint Patrick sitere na Ireland, ebe ọ bụ na emere ya iji sọpụrụ onye nlekọta ya na Machị 17. Green bụ ụda site na ahụmịhe na onye ọ bụla na-aga n'okporo ámá, mgbe ụfọdụ na-emegharị. The shamrock bụ akara ụbọchị ahụ, nke a na-eji asọpụrụ nkuzi nke Saint Patrick. N'ihi na ndị njem ahụ gara United States, ụbọchị a dịkwa ezigbo mkpa na mba a. Taa ọ bidola mee emume n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ. N'ezie, anyị agaghị echefu na ọ bụ emume sitere na mmalite ya sitere n'okpukpe, n'agbanyeghị agbanyeghị taa ọ dị ka ebuli biya biya Irish n'ọtụtụ ebe.
Ndị a bụ ndị nwoke leprechaun bụ akụkụ nke akụkọ ifo nke Irish nakwa na ha na-ada ụda nke ọma nye onye ọ bụla. A na-ekwu na ha nwere ọtụtụ ọla edo zoro ezo na akụkọ a na-ekwu na ọ bụrụ na ị hụ ha na site na oge ị jisiri ike ijide ha na ọla edo ha ọ ga-ewetara gị ọtụtụ chioma. Ndị goblins a na-apụta n'ụzọ ewu ewu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, agba ọdịnala nke mba ahụ yana uwe na okpu.
Agbamakwụkwọ na Ireland
Agbamakwụkwọ na Ireland na-agwakọta ụfọdụ ọdịnala. A na-eme ụfọdụ dị ka ọdịnala Ndị Kraịst si dị ma ọtụtụ di na nwunye na-agụnye agbamakwụkwọ ha ụfọdụ omenala ndị a na-ahụkarị nke agbamakwụkwọ Celtic na agbamakwụkwọ ndị ọgọ mmụọ. Otu n'ime omenala ndị mara mma bụ ijikọ ejikọtara aka nke nwoke na nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ na ụta, nke na-ese onyinyo njikọ ha. N'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ ndị nwunye na-eyi okpueze okooko osisi n'isi ha n'ụdị Celtic. Omenala nke gbasarala na mba anyị nke iyi ihe ọhụrụ, ihe agbaziri, ihe na-acha anụnụ anụnụ na ihe eji ya sitere na Ireland.
Ireland na-enwekwa egwuregwu a ma ama n'ụwa niile dịka ịgba rugby. Agbanyeghị, na mba a, ha nwere egwuregwu nke aka ha, nke a na-amaghị nke ọma na mpụga ala ya, mana nke dị na Ireland bụ ndị ama ama. Anyị na-ekwu maka ịchụpụ na ịgba bọọlụ Gaelic. Na linggba ọsọ bụ egwuregwu pụrụ iche ma o doro anya na ọ bụ agadi nke nwere ìgwè abụọ nke ndị egwuregwu 15 nwere osisi ga-ebu obere bọọlụ ruo ihe mgbaru ọsọ. N'aka nke ọzọ, egwuregwu Gaelic bụ ngwakọta nke football na rugby, nke dịkwa ọdịnala nke ukwuu ma jiri ọtụtụ, ọtụtụ egwuregwu na-egwuri egwu. O bidoro na narị afọ nke iri na isii ma taa ndị otu si obodo dị iche iche na-asọrịta mpi.
Nri na Ireland
Dị ka ọ bụla na omenala ndị ọzọ, ndị Irish nwere efere pụrụ iche. Ọ bụrụ na anyị ga-aga Ireland ga nwale Irish Stew, Stew na-atọ ụtọ nke nwere akwụkwọ nri na atụrụ. Azụ ihe oriri na-azụ mmiri bụ ezigbo nri na oke nri. O mejuputara ofe di oke ocha n’acha ohuru. You gaghị agbaghara ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ nri dị oke mkpa na anyị ga-ahụ na England ka afọ ojuju. Anyị na-ezo aka n'akụkọ ifo azụ & ibe, na ibe na eghe iyak.
Samhain na Yule
Nwere ike ị gaghị amata ememme anyị na-ekwu maka aha ndị a, ebe ọ bụ na anyị na-akpọ aha ndị ọgọ mmụọ na Celtic. Ihe dika anyi nile mara bu Halloween ma obu Day of the Dead n’ebe ufodu na ekeresimesi. Na Ireland A na-eme ememme Halloween, nke ewebatala taa, n’abalị iri atọ na otu nke ọnwa Ọktoba, mana Nọvemba 31 bụ ụbọchị ezumike niile. Na Samhaín bụ emume nke na-eme ngwụsị oge owuwe ihe ubi ma ewere ya dị ka afọ ọhụrụ na ọdịnala ndị Celt. Ihe omuma a putara 'njedebe nke oge ezumike'. Taa a na-eme emume ha site na Halloween rue Samhain, ebe ọ bụ na na Ireland ha tufuo nnukwu ọdịnala ha.
Egwú na ịgba egwu
Egwu ndi Irish bukwara na omenaala ha. Ngwaọrụ dịka ọjà, violin ma ọ bụ akpa ha bụ akụkụ nke egwu ọdịnala ọdịnala a ka na-eme ka enwee njirimara ụbọchị taa. Ihe edeturu bụ egwu egwu ọdịnala ndị Irish, nke a na-eji egwu siri ike ma gbagọọ agbagọ na otu. Taa enwere ike ịhụ ihe ngosi gburugburu ụwa ebe a na-agba egwu ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Omenala ndị Irish
Omenala nke France